Dabley aan heybtooda la garaneyn oo toogasho ku dilay Abuukar Maxamuud Caraale (Jilibeey) gudaha suuqa Bakaaraha ee magaala ada Muqdisho | Somalisan.com Home
Dabley aan heybtooda la garaneyn oo toogasho ku dilay Abuukar Maxamuud Caraale (Jilibeey) gudaha suuqa Bakaaraha ee magaala ada Muqdisho
1/1/2013 8:48:00 AM
waxaana la sheegay inuu mudooyinkan dambena uu ka howlgalayey NGO-yo maxali ah isaga oona Magaalada baydhabo ka soo guurey .
Kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa galabta toogasho ku dilay nin shacab ah magalada Muqdisho kaasoo la sheegay inuu isla goobta lagu qaarajiyey ku geeriyooday. Dilkan ayaa ka dhacay galabta wadada labaad ee Suuqa Bakaaraha gaar ahaan meel ku dhow masaajidka Abuu Hureyra, iyadoo kooxihii dilka geystayna ay goobta ka baxsadeen sida dad goob joogayaal ah ay sheegeen.
“Galabta labo nin oo bastoolado ku hubeysan ayaa waxay ku dileen agagaarka masaajidka Abuu hureysa ee Suuqa Bakaaraha nin shacab ah, ka dibna wey baxsadeen” sidaas waxaa yiri goob jooge ku sugnaa goobta dilkaas uu ka dhacay ee Suuqa Bakaaraha.
Ninkan la dilay oo magaciisa lagu sheegay Abuukar Maxamuud Caraale (Jilibeey) ayaan la ogeyn sababta loo dilay iyo cida ka dambeysa dilkiisa, waxaana la sheegay inuu mudooyinkan dambena uu ka howlgalayey NGO-yo maxali ah isaga oona Magaalada baydhabo ka soo guurey .
Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka iyo qaraxyada ay geysanayaan kooxaha hubeysan, maalin ka hor ayeyna aheyd markii qarax ka dhacay gudaha Suuqaasi lagu dhaawacay in ka badan 10 ruux oo uu ku jiray askari ka tirsan ciidamada dowlada, waxaa ka sii horeeyey dil loo geystay gudoomiyihii ganacsatada Suuqaasi iyo dhowr qof oo kal